WFP oo iska fogeeysay Raashin Dhacay oo Lagu Qabtay Muqdisho. | RADIO Haatuf
Home / WARARKA MAANTA / WFP oo iska fogeeysay Raashin Dhacay oo Lagu Qabtay Muqdisho.
WFP oo iska fogeeysay Raashin Dhacay oo Lagu Qabtay Muqdisho.
OgaalFM- Hay’adda WFP ayaa si kooban kaga hadashay raashiin dhacay oo Ciidamada amaanka ee Garoonka Muqdisho ay qabteen.
Layla Cali, oo ah Sarkaalka u qaabilsan Xafiiska WFP ee Soomaaliya dhanka Xiriirka ayaa Wakaalada Wararka Soomaaliyeed ee SONNA u sheegtay in la hubinayo raashiinka Ciidamada amaanka ee garoonka Muqdisho ay qabteen.
Waxa ay sidoo kale sheegtay in Hay’ada WFP aysan raashiin dhacay marnaba u keenin doonin shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay hubinayaan raashiinkaasi dhacay ee lagu eedeeyay Masuuliyadiisa Hay’ada WFP.
Layla Cali, ayaa sidoo kale Wakaalada SONNA u sheegtay in aysan rumaysnayn in Hay’ada WFP raashiin dhacay oo gargaar ah u yaallo Muqdisho balse waxa ay intaa raacisay in ay hubinayaan WFP haddii badeecadeeda loo kaydiyay si aan wanaagsanayn oo ka dibna ay waxyeelo soo gaartay intii ay sugaysay daabulidda.
“Si wanaagsan ayay uga warhayaan Dadka aan caawino in muhiimadeenna koowaad ay tahay xaqiijinta Tayada iyo badqabka caawinaadda aan bixino, waxaanna isticmaalaa cabirka ugu sareeya si aan u hubinno arinkaas” ayay tiri Layla Cali.
Layla Cali, oo ah Sarkaalka u qaabilsan Xafiiska WFP ee Soomaaliya dhanka Xiriirka ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixin laakin waxa ay sheegtay in la baarayo.
Previous: Kenya oo ka hadashay muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya.
Next: Faahfaahin Madaafiic xalay ku dhacay degmooyinka Dayniile iyo Howlwadaag.